Van.Eko 🐝 Be.e – 🛵 इलेक्ट्रिक स्कूटर 2020
160 किमी (45 km/h)
200 किमी (25 km/h)
Be.e एक विद्युतीय र पारिस्थितिकी स्कूटर हो जुन प्रायः पौष्टिक आधारित सामाग्रीबाट बनाइन्छ।
स्कूटर एप्लाइड साइंस , इन टोल डेल्फ्ट , बायोप्लास्टिक निर्माता एनपीएसपी कम्पोजिट र डच डिभिजन स्टूडियो वार्ममर्स को बीच एक सहयोगिक प्रयासको रूपमा विकसित गरिएको छ। परियोजना डिजाइन स्टूडियो Waarmakers द्वारा शुरू गरिएको थियो।
स्कूटर हेम्प (कानाबिस बिरुवा), स्याक्स, र जैव रालको मोनोकोक शरीरको साथ बनाइएको पहिलो बायोकोमोजाइट इलेक्ट्रिक स्कूटर हो।
जैव-मिश्रित मोनोकोक्को शरीरले अण्डाको खोल र मस्तिष्कलाई असाधारण शक्ति प्रदान गर्दछ। प्रविधि सूत्र 1 बाट उत्पन्न हुन्छ। शेलमा फाइबरजल पलिएस्टरको रूपमा समान गुणहरू छन्, जुन सामान्यतया डुङ्गाहरू, स्विमिंग पूल र पवनमिल निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ।
मोनोकोक ढाँचा भनेको त्यहाँ आन्तरिक इस्पात फ्रेम हो। बी.ई. ठूलो मात्रा मा सब्जी र जैव-ग्रेग्रेडयोग्य हुन्छ।
बी.ई. 160 किलोमीटर (80 किलोमिटर प्रति ब्याट्री) को लागि दुई 2.5 किलोवाट हाइ लिथियम ब्याटर (अधिकतम5किलोवाट) को लागि कनेक्टिविटी प्रदान गर्दछ।
स्कूटरले 1209लाख टोककसँग 4,000 वाट बिजुली मोटर बनाएको छ। स्कूटर2यात्रुहरू संग खपत पहाडहरू चढाउन सक्षम छन्। स्कूटरले 0-50 किलोमिटर / घन्टाबाट सात सेकेण्डमा गति बढाउँछ। माथिल्लो गति 58 किमी / घन्टा छ।
स्कूटरले थप छिटो गतिवर्णनका लागि वृद्धि बटन प्रदान गर्दछ।
स्कूटर लामो समयदेखि दैनिक उपयोगको लागि बलियो र टिकाऊ बनाउन डिजाइन गरिएको थियो। स्कूटर डोमिनो (इटाली) जस्ता ब्रान्डहरूबाट उच्च गुणस्तरको घटकबाट निर्माण गरिएको छ।
Van.Eko4वर्ष वा 20,000 किलोमिटर वारंटी प्रदान गर्दछ।
स्कूटर धेरै रंगहरूमा उपलब्ध छ र अनलाइन कन्फिगरकर्ता मार्फत अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
2020 Van.Eko मोडेलहरू
फिल्टर अवलोकनमा सबै Van.Eko स्कूटरहरू हेर्नुहोस्: